IMEX na -ebute ụzọ na nzukọ ndị Europe na njem mgbakọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » nzukọ » IMEX na -ebute ụzọ na nzukọ ndị Europe na njem mgbakọ
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
N'ịbụ onye na -ebute ọdịnihu nke nzukọ Europe na ụlọ ọrụ mgbakọ, MMGY Hills Balfour na MMGY Travel Intelligence Europe na -arụkọ ọrụ na oke ibu ụwa na onye isi ụlọ ọrụ MICE, IMEX, iji chepụta ma mepụta nyocha 2021/22 nke akpọrọ “Eserese nke nzukọ ndị Europe na Njem Mgbakọ: Echiche nke ndị njem na ndị ọkachamara na -eme atụmatụ. ”
Emebere nyocha a iji nyochaa ọ bụghị naanị mmetụta nke onye na -eme atụmatụ kamakwa ọ dị mkpa, ebumnuche na mmasị nke ndị bịaranụ.
Ọ ga -enye aka duzie mkpebi gbasara itinye ego, mmefu ego ire ahịa, mmụba n'ozuzu ya na atụmatụ mmepe.
Nyocha a ga -enye nghọta doro anya, nke zuru oke, na nke bịara n'oge ihe nzukọ na mgbakọ dị na Yurop dị ugbu a na n'ọdịnihu.
Nke izizi n'ụdị ya na Europe, emebere nyocha a iji nyochaa ihe karịrị ihe ndị dị ugbu a, na -enyocha ọ bụghị naanị nzute echiche kamakwa ọ dị mkpa, ebumnuche na mmasị nke ndị bịaranụ. Ebe ndị Europe na ụwa niile yana ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya nwere ohere ibute mgbake na obodo ha, dabere na mgbe na ka ụlọ ọrụ nzukọ si malite na COVID-19. Nyocha a ga -enye aka duzie mkpebi ha na itinye ego, mmefu ego ire ahịa, atụmatụ na mmepe niile site na ịnye nghọta doro anya, nke zuru oke na nke bịara n'oge ihe nzukọ na mgbakọ dị na Europe dị ugbu a. n'ọdịnihu.
Eserese nke nzukọ ndị Europe na Njem Mgbakọ
Dịka e mere ka ọ pụta ìhè na nyocha MMGY Travel Intelligence nyocha US na nso nso a, enwere ike nwee nnukwu ọdịiche dị n'etiti nghọta na akparamagwa n'etiti ndị nhazi na ndị bịaranụ. Europe bụ isi ụlọ ọrụ nke ụfọdụ ndị na -ahazi ihe omume azụmaahịa zuru ụwa ọnụ yana, site na nghọta dị oke mkpa enyere na nyocha a, ebe nwere ike ịpụta na ntụkwasị obi na ihe ọmụma na nghọta ha banyere mpụga MICE Europe na ọnwa na afọ ndị na -abịanụ.
N'ikwu banyere nyocha US, Butch Spyridon, Onye isi ala na onye isi oche nke Nashville Convention & Visitors Corporation (NCVC), kwuru, sị: “Nnọkọ & Mgbakọ nyocha nke MMGY Travel Intelligence kpughere gosipụtara ezigbo onyonyo nke ụlọ ọrụ ahụ ma nye nghọta dị oke mkpa na Ndị na -eme atụmatụ US na ndị bịaranụ. Site n'enyemaka nke data ziri ezi a, Nashville nwere ike ịmepụta atụmatụ M&C siri ike, dị mkpa ma na-aga n'ihu, na-enyere aka ịhazigharị na ịkwalite onyinye anyị azụ ahịa. "
Carina Bauer, IMEX Onye isi otu, kwuru, sị: “Ka nzukọ ndị Europe na ụlọ ọrụ ihe omume na -amalite 'iwuli elu ka mma,' nchọpụta nchọpụta a ga -enye echiche ọhụrụ na ozi azụmaahịa dabere na ụda, data nnọchite anya. Anyị niile nwere echiche visceral ebe anyị siri bịa na ihe anyị gabigara n'ime afọ abụọ gara aga. Nchọpụta a na -ezube ikpughere nke ọma ebe anyị na -aga. ”
Nyere ndị nhazi gburugburu Europe na ndị bịara na UK, Germany, France na Netherlands, a ga -eme nyocha ahụ na ebili mmiri abụọ: nke mbụ na Q4 2021 na nke abụọ na Q1 2022.
Ọ ga -ekwu maka isiokwu dị mkpa na oge dịka:
● Kedụ ka ndị bịaranụ si eche maka nzukọ mebere na ngwakọ yana kedu ka ha chere na enwere ike imetụta omume ha na 2022 na karịa?
Kedu ebe ogbako na-amasị ndị bịaranụ na-aga n'ihu na kedu ka mgbanwe ndị a siri gbanwee n'ihi COVID-19?
● Akụkụ ụlọ ọrụ ụfọdụ nwere ike yikarịrị ka ngalaba ụlọ ọrụ ndị ọzọ ka ha gaa n'ihu na-aga otu ha siri mee tupu COVID-19?
Content Kedu ọdịnaya, ebe egwuregwu na/ma ọ bụ ihe mkpali ga -abụ ihe ga -eme ka ndị bịaranụ kpebie ime njem maka nzukọ?
● Kedụ ihe mgbochi ndị ọzọ, ewezuga ihe gbasara ahụike na nchekwa, kwesịrị ka ewepu ma ọ bụ belata?
● Kedu ngalaba nzukọ (dịka SMERF, mkpakọrịta, ụlọọrụ, wdg) ndị nhazi na -atụ anya ka ha gbakee nke mbụ yana kedụ usoro iheomume a tụrụ anya ya?
● Kedụ ka ụlọ ọrụ na -ahụ maka ịre ahịa na ndị na -ahụ maka njikwa ga -esi mezuo mkpa nzukọ dị ugbu a na ọdịnihu?
● Kedụ ka ihe eji eme ihe ma ọ bụ lọjistik nwere ike isi metụta nhazi otu, kedu usoro nchekwa ọhụrụ ga -adị oke mkpa maka ndị nhazi na ndị bịaranụ?